Qiimo jaban CNC u rogaya warshad birta kaarboon iyo alaab-qeybiyeyaal. Ouzhan
Xarunta leexashada qaybaha leexashada ayaa aad ugu habboon in lagu farsameeyo noocyada shaqada sida qaybaha qalooca iyo qalabka qalajinta ee qalooca. Qaybaha qalooca ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa goobaha warshadaha, sida aaladaha marawaxadaha, qalabka wax lagu iibiyo markabka, wax soosaarka warshadaha oo leh dusha sare ee silsilad dusha sare, iyo wixii la mid ah. Guud ahaan, dusha sare ee qalooca waxaa lagu socodsiiyaa jeestay.
Birta kaarboonku waa bir bir-karboon ah oo leh kaarboon ka kooban 0.0218% ilaa 2.11%. Sidoo kale loo yaqaan birta kaarboon. Guud ahaan, waxa kale oo ku jira qaddar yar oo silikoon ah, manganis ah, baaruud ah, iyo fosfooras. Guud ahaan, markay ka sarreeyaan kaarboon-ka ay ku jirta birta kaarboonku, way sii adkaataa adkaanta oo way sarreysaa awoodda, laakiin waxay hoos u dhigtaa baaxadda. Birta Kaarboonka CNC ee leexinta ayaa si ballaaran loo isticmaalaa waxayna ku habboon tahay inta badan qaybaha farsamada. Ouzhan wuxuu si xirfad leh u habeyn doonaa qaybaha mashiinka si waafaqsan sawiradaada iyo shuruudahaaga.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Isukeelaya Qaybta Mashiinka Mashiinka ee CNC
Faa'iidooyinka Ouzhan Kaarboonka Birta u Jeediyay
- Qiimo jaban, oo si fudud loo urin karo
- Tiknoolajiyad farsameyn wanaagsan
- Hagaajinta waxqabadka (C%, daaweynta kuleylka)
- Wareegga waxsoosaarka degdegga ah, bixinta degdegga ah
OEM kartoo steel carbon jeestay adeegga-Shiinaha Shanghai CNC carbon steel jeestay qaybo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxay ku shaqeyn kartaa birta kaarboon leh qaybo xasiloon oo sare oo CNC ah oo lagu kalsoonaan karo. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka rogista birta birta ah. Intaa waxaa dheer, CNC soo rogaya alaabada birta kaarboonku si adag u bixiso waxay u hoggaansamaan heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa biraha birta ah ee birta ah ee tartamaya CNC alaabada macaamiishayada qiimaha leh.
Ouzhan kaarboonka birta ah ee leexiya qaybo ka mid ah faa'iidooyinka
(1) Wareeggu wuxuu ku habboon yahay ka shaqeynta dusha sare wareega gudaha iyo dibaddaba. Kala duwanaanta saxnaanta mashiinka ee leexashadu waa IT13 ～ IT6, iyo qallafsanaanta dusha sare ee Ra waa 12.5 ～ 1.6.
(2) Qalabka leexinta wuxuu leeyahay qaab-dhismeed fudud iyo soo-saarid fudud, taas oo ku habboon xulashada macquulka ah ee qalabka qalabka iyo xagasha joomatari iyadoo loo eegayo shuruudaha wax-qabadka. Sidoo kale waa ku habboon tahay in la afmeero oo la soo ururiyo oo la kala furfuro qalabka leexinta.
(3) Leexashadu waxay leedahay la qabsi xoog leh qaabdhismeedka, maaddada, dufcadda wax soo saarka, iwm ee qalabka shaqada, waana la adeegsadaa. Marka lagu daro leexashada dhammaan noocyada birta, birta birta ah, iyo biraha aan birta ahayn, waxay kaloo rogi kartaa biraha aan ahayn biraha sida fijbaaska, bakelite, nylon iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid ah biraha aan birta ahayn ee aan ku habboonayn wax shiididda, qalabka leexinta dheemanka ayaa loo isticmaali karaa u rogid ganaax, taas oo heli karta saxnaanta waxqabadka sare iyo qiimaha dusha sare ee dusha sare.
(4) Marka laga reebo cirifka dusha sare ee sinnaanta ee maran, inta badan leexashadu waa goyn joogto ah oo leh iskutallaab goyn siman. Sidaa darteed, xoogga goynta waxyar baa is beddela, hannaanka goynta ayaa xasilloon, taas oo ku habboon goynta xawaaraha sare iyo goynta xoogga leh, waxayna leedahay wax-soo-saar sare oo wax soo saar leh.
Faa'iidooyinka adeegga Ouzhan biraha birta ah
- Dhammaan saxnaanta CNC ee soo rogeysa alaabada birta kaarboonku waxay ku xiran yihiin baaritaanno tayo leh oo adag.
- Adeegga degdegga ah ee OEM wuxuu xaqiijin karaa inaad hesho alaabada aad rabto, taageer DDP, CIF, FOB iyo hababka kale ee gaadiidka si loo hubiyo in macaamiisha ay alaabada u heli karaan si badbaado leh.
-Sida ku socota sawirro ama shaybaarro si loo soo saaro saxnaanta qaybaha birta birta ah.
Hore: Naxaas farsamo kartoo jeestay qaybo processing qalabka
Xiga: Soo saaraha Shiinaha qaybo ka mid ah birta birta ah ee birta la shiiday